Fifamoivoizana: Miverina ny police de la route
lundi, 13 janvier 2020 21:02
Miverina androany faha 13 janoary 2020 ny police de la route, araky ny nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Polisim-pirenena. Ny eto Antananarivo no voalohany hiverenan'izany police de la route izany, satria teto no nahavita ny fihofanana.
Ny fihofanana any amin'ny faritany dia hanomboka amin'ity herinandro ity.
Voalaza ihany koa fa ny imprimerie nationale no hanota ny atontan-taratasin-tsazy izay manodidina ny roa na telo volana eo ho eo. Mandram-pahatonga an'izay dia hisy ny fiche de contravention provisoire izay noezahina tsy ho mora alain-tahaka, izay 1000 feuillets isaky ny roa herindrandro no avoakan'ny ministera ho an'Antananarivo manokana, ary ihany koa takela-by iray momba ny ady amin'ny kolikoly, miampy an'ireo fitaovana vitsivitsy toy ny fluorescent sy ny fanavaozana ny fanamiana mba ho araka ny toetran'ny andro.
Mangataka fiaraha-miasa amin'ny kaominina koa izy ireo amin'ny fametrahana ilay taquet d’arrêt ho an'ireo fiara manao fijanonana tsy ara- dalana, ary ihany koa fiaraha-miasa eo amin'ny Tafika Malagasy izay hibata avy hatrany ireo fiara mijanona ireo.
Marihina fa nisy ny fihofanana manokana hoan'ireo polisy hisahana ny fizotry ny lalana ireo, ary notsongaina izy ireo fa tsy ny polisim-pirenena rehetra dia afaka manao izay police de la route izay.